Khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay madaxweynaha Puntland iyo kuxigeenkiisa | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay madaxweynaha Puntland iyo kuxigeenkiisa
Khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay madaxweynaha Puntland iyo kuxigeenkiisa
Xorriya Online: Xafiiska madaxweyne kuxigeenka Puntland, Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa sharci darro ku timaamay iyo arrin baalmarsan dastuurka iyo xeerarka Puntland digreedto uu madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni shalay ku magacaabay taliyaha iyo taliye kuxigeenka madaxtooyada Puntland.
Bidix, madaxweyne kuxigeenka Puntland, Axmed Cilmi iyo Madaxweyne Deni
Warqadda ka soo baxday xafiiska madaxweyne kuxigeenka Puntland oo soo gaartay Xorriya Online ayaa lagu sheegay in magacaabista taliyaha madaxtooyada iyo ku xigeenkiisa aan lagala tashan madaxweyne kuxigeenka sidaas darteedana ay ka hor-imaaneyso dastuurka iyo xeerarka kale ee u yaal dowlad goboleedka Puntland.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan ayaa ugu baaqay taliyeyaashi uu xilka ka qaadey madaxweyne Deni in aysan marna u hoggaansamin oo ay sii wataan waajibaadka saaran.
Ammaradaan iyo warqadahaan is khilaafsan ee ka soo kala baxay xafiisyada madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka puntland ayaa muujinayo in uu jiro khilaaf xooggan iyo in uu midkasto muujiyo awoodiisa.
Khilaafka labadaan mas’uul ee ugu sarreyso Puntland ayaa ku soo aadayo xilli ay deegaanada maamulkaas ay ka jirto xaalado dhibaato leh, sida xanuunka COVID-19 iyo daadad xooggan oo deegaanada qaar ku soo rogmadey, haba ugu darnatee magaalada Qardho.
Waxaa la xasuustaa in khilaaf sidaan oo kale oo soo kala dhexgalay madaxweyne Deni iyo guddoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo Daareed) oo markii dambe sababay in mudanayaasha baarlamaanka oo taageerayo Deni ay xilkii ka qaadeen.